Douglas Karr | Onye guzobere Martech Zone
Tọzdee, Septemba 23, 2021 Tọzdee, Septemba 23, 2021 Douglas Karr
Anọ m na -arụ ọrụ na saịtị ndị ahịa WordPress n'izu ole na ole gara aga nke nwere ọtụtụ ihe mgbagwoju anya. Ha na -eji WordPress yana njikọta na ActiveCampaign maka ịzụlite ndị ndu yana ntinye Zapier na Zendesk Ree site na Fdị Elementor. Ọ bụ nnukwu usoro… Enwere m mmasị n'ezie n'ụdị mgbanwe Elementor na anya na
Brandemonium nke akara mba ụwa na akara ahịa mba ụwa dabere na Cincinnati ga-alaghachi n'afọ nke ise na Wenezde na Tọzdee, Ọktọba 6-7, 2021, site na iji Hopin. Brandemonium 2021 ga-elekwasị anya n'ile anya n'ọdịnihu site na topsy-turvy 2020 na 2021. Isi ihe nke ogbako ahụ ka bụ ike ike. Mgbe ọnwa 16 gara aga, ụdị ga -emegharị ngwa ngwa karịa ka ọ dị na mbụ. Anyị ekwupụtala ụfọdụ nnukwu ndị isi ahịa na ụwa ika iji kwuo maka ọdịnihu. Onye nchoputa Brandemonium
Otu n'ime ọrụ na -atọ ụtọ ma na -enye afọ ojuju nke m nwere na -arụ ọrụ dị ka onye njikwa ngwaahịa maka ikpo okwu SaaS. Ndị mmadụ na -eleda usoro a chọrọ iji mee atụmatụ nke ọma, chepụta, ụdị, na imekọ ihe ọnụ na obere mgbanwe onye ọrụ anya. Iji mee atụmatụ atụmatụ kacha nta ma ọ bụ mgbanwe nke onye ọrụ, m ga -agba ndị ọrụ nọ n'elu ikpo okwu ajụjụ ọnụ ka ha si eji ma na -emekọrịta ihe n'elu ikpo okwu, na -agba ndị na -achọ ahịa ajụjụ ọnụ ka ha si eme ya.
Ọ bụrụ na ị na -arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị otu onye ọrụ, enwere ohere maka ụlọ ọrụ gị iji ntinye aka email iji jikwaa na ịkwalite mmata, nnweta, mbilite n'ọnwụ, na atụmatụ njigide mana ime ya n'ụzọ na -adịghị emetụta. Ndị ọrụ gị na -ede ma na -eziga ọtụtụ ozi ịntanetị kwa ụbọchị ruo narị otu narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị puku kwuru puku, nke ndị nnata. Ala na ụlọ na email ọ bụla 1: 1 nke na -ahapụ sava email gị bụ ohere dị ịtụnanya nke ahụ bụ